Tag: mambure ekusimudzira mamaki | Martech Zone
Tag: mambure ekusimudzira mamaki
6 Makiyi Ekuita Maitiro eMutengi Kugutsikana
Svondo, Nyamavhuvhu 28, 2016 Chishanu, December 15, 2017 Douglas Karr
Makore apfuura, ini ndakashanda kune imwe kambani yakateedzera yavo yekufona vhorumu mukushandira vatengi. Kana yavo yekufona vhoriyamu ikawedzera uye iyo nguva yekufona ikaderedzwa, ivo vaipemberera kubudirira kwavo. Dambudziko raive rekuti havana kubudirira zvachose. Vamiriri vevashandi vanongo mhanyisa kufona kwese kuti vatore manejimendi yavo Mhedzisiro yacho yaive vamwe vatengi vakatsamwa avo vaifanirwa kudzokorora kudzoka kuti vawane resolution. Kana iwe
Ndeipi iyo Net Inokurudzira Score (NPS) Sisitimu?
Muvhuro, July 21, 2014 Muvhuro, March 13, 2017 Douglas Karr
Vhiki rapfuura, ndakaenda kuFlorida (ndinozviita makota ese kana zvakadaro) uye kekutanga ndakateerera bhuku rinonzwika munzira yekudzika. Ini ndakasarudza iwo Wekupedzisira Mubvunzo 2.0: MaNet Anosimudzira Makambani Anobudirira Sei muNyika Yevatengi Inotungamirwa mushure mekutaurirana nevamwe vanoita zvekushambadzira online. Iyo Net Inosimudzira Score system yakavakirwa pamubvunzo wakapusa… iwo wekupedzisira mubvunzo: Pane chikero che0 kusvika 10, sei